Wax ka oggow taariikhda macallin Cabdiraxmaan Macallim “Taree” | Radio Himilo
Home / Cayaaro / Wax ka oggow taariikhda macallin Cabdiraxmaan Macallim “Taree”
Posted by: Mahad Mohamed March 27, 2019
Himilo FM –Cabdiraxmaan Macallim Axmed oo ku caan baxay magaca Taree waxa uu ku dhashay magaalada Muqdisho gaar ahaan degmada Warta nabadda sannadkii 1976-kii. Waxa uu xafiday Qur’aanka kaddib waxa uu ku biiray iskuulka Maxamuud Xarbi isaga oo halkaasi ku qaatay dugsi hoose iyo dhexe kaddib waxa uu ku biiray dugsiga 15 May waxa uu halkaasi kaga aflaxay dugsiga sare sanaddii 1990-kii. Waxa uu Sidoo kale maadada cilmiga bulshada ka dhammeeyay jaamacadda Xamar.
Macallim Taree waxa uu ciyaaraha kusoo biiray isaga oo aad u da’yar waxa uu kamid ahaa dhallinyarada ugu firfircoon degmada Warta nabadda sannadkii 1986-kii. Waxa uu iskuulka Maxamuud Xarbi kula guuleytay koobka iskuulada, wixii intaa ka danbeeyay waxaa u bidhaamay iftiinka kubadda cagta iyo hibadiisa ciyaareed isaga oo ku biiray dhowr koox oo isugu jira heerka koowaad iyo heerka labaad sida Sheel, STS, Bariga dhexe,Shabelle United,Al Nasiib iyo Feynuus, waxaana uu kula guuleystay koobab badan isaga oo xirfaddiisa ciyaareed soo gabagabeeyay sanaddii 2006-dii.
Sannadkii 2009-kii waxa uu Taree kusoo biiray saaxadda tababarnimo isaga oo hoggaamiye u noqday naadiga Muqdisho City Club, intii uu joogay kooxda waxa uu kula guuleytay laba koob sida Jeneraal Daa’uud oo uu qaaday xilli ciyaareedkii 2011-12 iyo horyaalka oo uu si layaab leh ku qaaday kaddib markii isaga oo aan laga adkaan uu hantay fasal ciyaareedkii 2013-14.
Waxa uu kooxda isaga hayaamay 2015 isaga oo ku biiray kooxda Gaadiidka muddo seddex sanno ah oo uu joogay kooxda waxa uu la qaaday tiro koobab oo munaasabado ah, 2018 ayuu ka dhaqaaqay.
Sanaddii 2018 waxa uu ku biiray kooxda Elman isla sannadkaasi waxa uu kooxda kula guuleystay koobka xiddigaha ama Star League oo markaas laga hirgeliyey koobabka u diiwaan geshan xiriirka kubadda cagta Soomaaliyeed, waxaana uu Elman kula guuleystay isaga oo aan laga adkaan kooxdiisa. Macallin Taree hadda waxa uu kamid yahay tababarayaasha xulka qaranka Soomaaliya.
Sannadkii 2004-tii Macallim Taree waxa uu hormuud u ahaa ciyaartoy Soomaaliyeed oo markii ugu horreysay loo qaaday dalka Spain gaar ahaan garoonka Santiago Bernabéu safar dibadda ah oo ay iska kaashadeen hay’adda Unicef iyo UNDP. Intii u dhaxeysay 2003 iyo 2006 waxa uu agaasime kasoo noqday Benaadir Youth Network.
W/Q: Maxamed Xasan Maxamed “Owen”
Previous: Maqal: Casharka Safiinatu Najaa ” Darsiga 18aad
Next: Man United oo kalsooni seddex sanno siisay Ole Gunnar Solskjær